Xog: Tirada xubnaha laga saarayo guddiga doorashada ee cabashada laga keenay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Tirada xubnaha laga saarayo guddiga doorashada ee cabashada laga keenay
Xog: Tirada xubnaha laga saarayo guddiga doorashada ee cabashada laga keenay
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa saacadaha soo socdo la filayaa in go’aan kama dambeys ah laga gaaro xubnaha cabashada laga soo gudbiyey ee guddiyada doorashada labada heer oo ay midowga musharixiinta u gudbiyeen Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Sida ay illo wareedyo lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen Caasimada Online, Guddiga heer wasiir ee xaqiijinta caddeymaha xubnahaas ayaa la filayaa inay caawa kala saaraan xubnaha 67 ah ee khilaafka ka taagan yahay.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, guddiga heer wasiir ayaa go’aan ku gaaray in la badalo qiyaastii illaa 45 xubnood oo ka tirsan 67 xubin ee cabashada laga soo gudbiyey
Guddiga ayaa Ra’iisul wasaare Rooble u gudbin doono go’aanka ay ka gaareyn kala saarista xubnahaas, waxaana kadib la filayaa inuu si rasmi ah u faafiyo Xafiiska Ra’iisul wasaaraha.
Howsha loo xil saaray guddiga heer wasiir ayaa dhaaftay waqtigii loogu talagalay in go’aan laga gaaro, waxayna saameyn ku yeelatay jadwalkii loo dajiyey doorashada Soomaaliya oo 27 Bishii May ay si wadajir ah u saxiixeyn Ra’isulwasaare Rooble, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo madaxda Maamul Goboleedyada.
Guddigan ayaa shaqadoodu tahay inay mid mid u baaraan xubnaha guddiga, kadibna go’aan kasoo gaaraan kuwa cabashada laga keenay ay saxda tahay si guddiga looga saaro, iyo kuwa aysan saxda aheyn ee ay tahay inaan la taaban.
Shaqada guddiga ayaa waxaa la sheegay inay saameyn ku yeelatay Villa Soomaaliya, waxaana soo baxeen shakhsiyaad awood ku dhex leh dowladda oo difaacaya xubnaha qaar ee cabashada laga keenay.
Shakhsiyaadkan ayaa waxaa ka mid ah wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan kuwaas oo guddiga ku qasbaya in xubnaha qaar aysan guddiga ka saari karin, ayada oo midba uu si gaar ah u difaacayo shakhsi gaar ah.
Go’aanka laga qaato xubnaha guddiga ee cabashada laga muujiyey ayaa dhaawici karta ama kor u qaadi karta kalsoonidii madax-banaani ee lagu qabay ra’iisul wasaare Rooble oo iminka wajahaya imtixaankiisa koowaad ee maareynta doorashada iyo abuurida jawi kalsooni geliya dhinacyada siyaasadda.